Isicwangciso esitsha sentengiso sophawu lweFreixenet | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Rhoqo ngonyaka kwezi Imihla yeKrisimesi, wonke umntu Silindele ezona zibhengezo zesiko Oko kubonakala unyaka nonyaka. Inyanga kaDisemba isondela kwaye, ke ngoko, onke amaphulo eKrisimesi.
La uphawu lwe cava Freixenet Rhoqo ngeKrisimesi wenza utyalo mali olubalulekileyo ngokwenza urhwebo kumabonwakude. Ababukeli bahlala belinde ukwazi ukuba ngoobani abantu abadumileyo abazakuvela kuyo.
1 UFreixenet waphula isiko
2 Uqikelelo lwasekhaya
3 Imibhiyozo yokubhengeza
4 Inkulumbuso enkulu
5 Izibhengezo zangaphambili
UFreixenet waphula isiko
Ngokungafaniyo neminye iminyaka, I-Freixenet yaphula izikimukuba awuqhelanga ukubona abantu abadumileyo kwiintengiso zakho. Eli 2018 lelokuqala akukho buso baziwayo buvelayo. Intengiso exhonywe kwi-Intanethi inexesha lemizuzwana eyi-0: 42. Ukuba sijikela kwi Kwiwebhu Siza kufumana umbuzo abasinceda kuwo ukuba sifumane impendulo: »Yintoni injongo yakho YIBhiyozele nge-FREIXENET?«. Ukungxama okuhamba neli phulo le #CelebraATuRitmo kukhatshwa sisicatshulwa esisikhuthaza ukuba sixabise yonke into esinayo.
«Ixesha elincinci okanye amaqela amakhulu. Kunye nosapho lwakho, abahlobo okanye iqabane. Kwikhaya lakho, elunxwemeni okanye kwindlu esemaphandleni. Bhiyozela indlela yakho ungxamile. Namhlanje namhlanje kwaye lo mzuzu wahlukile. Apha ngoku. Kuba eyona nto intle ebomini kukufumanisa ukuba igcwele ixesha elincinci nelincinci lokubhiyozela.
Ukubheja kwalo nyaka kubhalwe «Bhiyozela ngesantya sakho«. Umlawuli wentengiso, uMartina Obregó, ucacisa ukuba malunga nendawo leyo usikhuthaza ukuba sibhiyozele impumelelo ebomini, nangona zincinci. Kwiveki ephelileyo isibhengezo senziwe kumasipala weSant Sadurní d'Anoia. Inkqubo ye- injongo Olu tshintsho lubangelwa kufuneka unxibelelane nenani elikhulu loluntu. Baqinisekisa ukuba injongo yabo kukunxibelelana zombini millennials nabantu abadala.
Le ndawo intsha ilandela umsonto oqhelekileyo osekwe kwimibhiyozo emine engapheliyo. Ezi zikhankanywe ngezantsi:
-A ukutya nosapho.
-A umhla wothando.
-A itheko elimnandi.
-A intlanganiso elunxwemeni lweqela lolutsha.
La ingoma edlala ngasemva kuyo yonke imiboniso nguCole Porter, unesihloko esithi «Ubusuku nemini«.
Kulo Indawo yokugqibela wentengiso, kwifayile ye- ipati ngohlobo, izihloko yonyaka ngamnye: Umbala wegolide y I-toast. Kufuneka siyigxininise loo nto I-toast yenziwe ngaphandle kokujonga kwikhameraKe ngoko, yinto yendalo ngakumbi kwaye ikude lee kunoko siqheleyo.
Okwangoku sinako jonga intengiso kwi Iphepha elisemthethweni leFreixenet nakumajelo asekuhlaleni, kodwa ayizukude Disemba 9 isasazwe yi umabonwakude.
El Intengiso yokuqala ephehlelelwe nguFreixenet ibibonisa inkwenkwe enxibe bomvu ngebhotile phantsi kwengalo yayo. Kamva ngo-1972 amaqamza azalwa, ethe unyaka nonyaka yabonisa olu phawu.
Babandakanya ubuso obudumileyo ngo-1977, hayi ngaphezulu okanye ngaphantsi kwe inkwenkwezi yamanye amazwe ULiza Minnelli. Uninzi lweenkwenkwezi zaseHollywood zalandela. IFreixenet ithathwa njenge Uphawu loovulindlela ukubonisa abantu abadumileyo kwilizwe liphela kwiintengiso zeKrisimesi.
Kwiminyaka eyi-10 ngokuKwaye ibisetyenzisiwe, Kwaye ngaphandle kokuphulukana neetoni zabo bakhethe i iqela lokubhukuda elihambelanayo, i izixhobo ezinesingqi somthambo okanye ukucela uluntu ukuba lungenele ukhuphiswano apho izigqibo zabo zoNyaka oMtsha kufuneka ziboniswe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Le Freixenet yeKrisimesi ayinazo iibhabhu ezaziwayo